"(Hoy Jesosy:) Fiadanana no avelako ho anareo, ny fiadanako no omeko anareo; tsy tahaka ny fanomen’izao tontolo izao no fanomeko anareo. Aza malahelo na matahotra ny fonareo." Jaona 14:27
Misy gazety-boky iray manindrahindra ny fanaovana fampitonian-tena, mampiseho olona iray mitalapetraka, ny tanana mivelatra eo ambony lohalika, ny maso mikimpy. Tsy mihetsika io olona io, ary manao izay “hahafoana” ny ao anatiny; amin’izany izy dia miezaka ny hanadino izay rehetra mampitebiteby na manavesatra azy eo amin’ny fiainany.
Manoloana io sary io aho dia maminavina ny tombontsoa goavana ananan’ny mpino kristiana. Zava-tsoa toa inona ny mahafantatra, amin’ny alalan’i Jesosy Kristy, Ilay Andriamanitra marina; zava-tsoa toa inona ny mahazo mifanerasera aminy toa zanaka sy ray ! Aleoko mivavaka amin’ny Mpamonjiko, Izay tia sy mihaino ahy, toy izay hitady izany lazaina fa fahafoanana izany, amina toa fampitombenan-tsaina miompana amin’ny tena ihany. Azoko atao malalaka ny mametraka aminy ny fanahiako mbamin’izay manery sy mampitebiteby ahy. Faly aho misaotra Azy. Izy no mahay mameno ny foko sy manome ahy ny fiadanany, dia fiadanam-po tena misy, tsy azon’inona na inona, tsy azon’iza na iza esorina amiko.
Izay rehetra mahafantatra Ilay Andriamanitra marina sy ny fitiavany amin’ny alalan’i Jesosy Kristy Mpamonjy, dia tsy mila manaraka fanao mety hanafin-doza. Tsy tandrintandrina akory ireo fanao ireo dia mety hitarika antsika tsy hibaiko intsony ny saintsika, fa hanolotra izany hofehezina hery ratsy. Ny fiononana sy ny fahatoniana azo avy amin’ireny fanao ireny, izay miasa eo amin’ny fieritreretan’ny olona sy ny fihetsiny, dia tsy misy ifandraisana amin’ilay fiadanana omen’ny Fanahin’Andriamanitra: “ny vokatry ny Fanahy… dia fitiavana, fifaliana, fiadanana…” (Galatiana 5:22). Kristy irery ihany no mahay manafoana ny tebiteby ao anatin’ny fo, mba hamenoany azy amin’ny fitiavany.